आर्मीलाई हराउँदै मनाङ फाइनलमा – Khel Dainik
दमक (खेलदैनिक) । दावेदार मानिएको बलियो प्रतिद्वन्द्वी त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब दमक गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार दमकस्थित दमक बहुमुखी क्याम्पसको खेलमैदानमा सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनलमा मनाङले आर्मीलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ५–४ ले हराउँदै फाइनल स्थान सुरक्षित गर्यो ।
यसअघि नियमित समयको प्रतिस्पर्धात्मक खेल दुवै टोलीले १–१ गोलको बराबरी खेलेका थिए । खेलमा अग्रता लिएर पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा अन्ततः आर्मी पराजित हुन पुग्यो । खेलको ३० औं मिनटमा टंक बस्नेतको हेड गोलद्वारा आर्मीले शुरुवाती अग्रता लिएको थियो । तर दोस्रो हाफको ४७ औं मिनटमा मनाङका लागि दिपक राईले बराबरी गोल फर्काएका थिए ।
Damak Gold Cup 2075: MMC Vs Nepal Army Club Spot-Kick Battle! Watch the VIDEO HERE!!!👇👇👇 https://t.co/WPYyzIJOVm
बुधबारको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मनाङका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ म्यान अफ द म्याच घोषित भए । अब मनाङले उपाधिका लागि शुक्रबार अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग फाइनल खेल्नेछ । दमक नगरपालिका, नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद १३ लाख ५१ हजार प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले ६ लाख हात पार्नेछ ।
← मनाङ र आर्मीको दोस्रो सेमिफाइनल भिडन्त आज मध्यपश्चिममा महिला फुटबलको रोमाञ्चकता शुरु हुँदै →
प्रतिष्ठित इलिट वुमन रेफ्री प्यानलमा अन्जना बैशाख २६, २०७५
किरनको टोली माजियाको लगातार दोस्रो जित बैशाख २६, २०७५
रोहितको टोलीसँग रोनाल्डिन्होको टिम पराजित बैशाख २६, २०७५
एभनिरलाई हेमजा गोल्डकपको उपाधि बैशाख २६, २०७५
एन्फा उपाध्यक्ष केसीलाई गृहजिल्लामा भव्य स्वागत बैशाख २६, २०७५
मैत्रीपूर्ण खेलमा एनआरटीको रोमाञ्चक जित बैशाख २६, २०७५